Kwayaka Metric: Yemagariro Kushambadzira Kugadziridza uye Ongororo | Martech Zone
Chipiri, Zvita 4, 2012 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Kwayedza Metrics yakazivisa yayo Yemagariro Media Inbox. Ichi chinhu chitsva chakasiyana nemamwe maturusi sezvo ichipa ruzivo rwakadzama sezvazvinoitika panzvimbo pehungwaru hwebhizimusi repamusoro muvhiki kana pamishumo yemwedzi, uye inobvumidza vashambadziri kuti vadzike ma1000 ezvekutaura kwezuva nezuva kusvika makumi maviri ezvinonyanya kutaurwa zvinoenderana zvinotevera.
Iyo Social Media Inbox inoita kuti vashambadzi vepamhepo vakurumidze kuziva zviri kutaurwa nezve avo mabhureki padhijitari midhiya uye nekuisa pamberi mhinduro dzavo munguva chaiyo-nguva. Iyo Inbox inosarudza matauriro ezvinotaurwa nekuongorora mazwi akakosha akaverengerwa muma hashtag uye zvinyorwa zvemahara, uyezve kuyambuka mareferenzi toni - yakanaka, isina kunaka, kana kwazvakarerekera - nekusvitswa kwemubati weakaunzi kuitira kuisa pamberi mhinduro.
Nekuda kweizvozvo, vatengesi vanogona kupindura kwakakosha kutaurwa kwezita sezvazvinoitika. Semuenzaniso, kana munhu anoshanda aine vateveri vakawanda akataura chinhu chakanaka pamusoro pechiratidzo, mushambadzi anogona kuvatenda nekusimbisa hukama ihwohwo. Zvakare, kana vanhu vaviri vakataura chimwe chinhu chisina kunaka, mucherechedzo unokwanisa kuona ipapo kusvika kwemunhu mumwe nemumwe, kukoshesa mhinduro uye kusvika pakubatsira kugadzirisa dambudziko.
Vashambadziri vezvemagariro vari kuwana maturusi echinyakare ekuteerera haana kukwana sezvo vachingopa njere dzebhizimusi repamusoro pamwe nechinhu chavanogona kushandisa zuva nezuva kuona kuti ndezvipi zvinonyanya kutaurwa kubva pakuona kwekushambadzira, "akadaro Scott Lake, CEO uye muvambi weSource Metrics. "Isu tinopa vashambadziri ruzivo mune chaiyo-nguva izvo zvinoita kuti vakwanise kuita zvakanyanya kukanganisa kwavo paruzhinji chiratidzo chiratidzo.
Iyo Yemagariro Media Inbox yakanyatsobatanidzwa neiyo Source Metrics chikuva kukurudzira zviito zvekuita uye basa rakagadziriswa. Kana mushambadzi awana zita rekutaura rinofanirwa nemhinduro, vanogona kupindura zvakananga kubva mukati mepuratifomu, vachishandisa yakakodzera account yemagariro.
Tags: magarirozvemagariro analyticskutarisana nevanhukushambadzira kwevanhuzvemagariro kushambadzira analyticssocial marketing optimizationkuongorora kwevanhukutsikisa munharaundasosi metrics
Vhidhiyo: Iyo Sayenzi yekunyengetedza